कोरोनाबिरुद्ध चीनको सफलताबाट के सिक्ने ? प्रा.डा. राजीव झाको अनुभव – Nepal Japan
नेपाल जापान २२ चैत्र १८:१३
शुक्रबार अपराह्न भैँसेपाटीस्थित निवास पुग्दा उहाँले चिनियाँ सरकारका प्रतिनिधि, प्राध्यापक र चिकित्सकहरुबाट बधाई ग्रहण गरिरनुभएको थियो । उहाँको वीच्याट अकाउन्टमा निरन्तर फोनको घन्टी बजिरहेपछि हामीले केहीबेर कुर्यौँ, उहाँले कोरोनाकै विषयमा अनुसन्धान गर्न चीनको केन्द्र र प्रान्तीय सरकारबाट ८ लाख आरएमबी (एक करोड ३२ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ) प्राप्त गरेको खबर भर्खरै चिनियाँ साथीहरुबाट पाएका प्रा.डा. झा पनि खुसी देखिनुहुन्थ्यो ।
“सरी है, चीनबाट साथीहरुको निरन्तर फोन आएकाले तपाईंहरुलाई कुराएँ” प्रा.डा. झा कुराकानीलाई अब तयार हुनुभयो । हामीलाई पनि जिज्ञासा भयो कोरोना विषयमा नै जान्ने । किनभने यतिखेर संसारका मानिसले सबैभन्दा धेरै खोजी गरेको र सुन्न चाहेको विषय कोरोनाबाट कसरी बच्ने भन्ने नै होला सायद । हामीले पनि यहीँबाट वार्ता शुरु ग¥यौँ– तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको अनुदान कस्तो हो ? यसबाट के गर्ने हो ?
औषधिलाई कोरोनाको थेरापीका रुपमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयको अनुसन्धान रहेछ । आफ्नो मोबाइल फोन सेटमा अनुसन्धानसार (एब्स्ट्र्याक्ट) देखाउँदै भन्नुभयो– यो एउटा ‘सिजनल ग्र्यान्ट’ हो र यतिखेर चीनले यस्ता अनुदानहरुलाई कोरोनाको विषयमा विशेष अनुसन्धान गर्नेगरी केन्द्रित गरेका छन् । मैले पनि कोरोना भाइरसका लागि औषधिलाई कसरी थेरापीमा प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्ने हो, यो वर्षदिनमा सक्नुपर्छ ।” उक्त अनुदानको शीर्षक रहेछ– ‘सेन्ट्रल गभर्मेन्ट रिसर्च फन्ड फर कोरोना’ रहेछ । केन्द्र सरकारले आठ र सियान प्रान्तीय सरकारले आठ लाख आरएमबी उहाँलाई प्रदान गरिएको रहेछ । यो अनुसन्धानबाट पनि कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा प्रयोग हुने एक प्रकारको औषधिकै विकासमा सहयोग पुग्दछ ।
कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीको पछिल्लो अपडेट लिइरहनुभएका प्राध्यापक झालाई अर्काे फोन आयो उहाँका पिएचडी विद्यार्थीको र भन्दै थिए– पछिल्ला दिन चीनमा नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छैनन्, हिजो त एकजनाको पनि मृत्यु भएन । उहाँको निर्देशनमा केही चिनियाँ र अन्य देशका शोधार्थीले मेडिकल विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेका छन् । त्यसैबेला उनले शनिबार चीनले कोरोनाबाट मृत्यु भएका चिनियाँ नागरिकको सम्झनामा श्रद्धाञ्जलि सभा गर्न लागेको र त्यसलाई राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाएर राष्ट्रिय शोकको दिनका रुपमा पनि घोषणा गरेको जानकारी गराए ।
प्रा.डा.झा त्यस समयको चीनको अनुभव सुनाउनुहुन्छ– चिनियाँ नागरिक वसन्त पर्वलाई धुमधाम मनाउने तयारीमा थिए त्यसैले धेरै स्वदेश र विदेशबाट घर फर्कदै थिए । चीनको द्रूतगतिको मेट्रो रेल भरीभराऊ थियो । हवाई जहाजका सबै सिट भरिएका थिए । नियमित भन्दा धेरै बढी उडान भइरहेका थिए । विश्वविद्यालय, विद्यालयहरु बन्द थिए । मानिसको चाप बढ्ने र आवत जावत पनि उस्तै हुने समयमा उहानमा विस्फोट भयो । जनवरी २३ मा देखिएको महामारीको धक्काले चिनियाँको नयाँ वर्षलाई समेत अर्को साल सारिदियो । उता पश्चिमाहरु भने कोरोनालाई सुरुमा उहान र पछि चिनियाँ भाइरसको नाम दिन थालेका थिए । आजन त्यही भाइरस संसारका २०३ देशमा पुगेको छ र अहिलेसम्म ५९ हजार नागरिकको ज्यान लिइसकेको छ ।
प्रा.डा झा भन्नुहुन्छ– “चिनियाँ सरकारले यो भाइरसको फैलावटको दर निकै खतरनाक हुने आँकलन गर्यो र उहानलाई इपीसेन्टर मानेर उहान, सियान, बेइजिङ मात्रै नभई धेरै प्रान्तहरुमा लकडाउन गर्ने घोषणा गर्यो । यो निर्णयलाई कतिपयले अलोकप्रिय भने पनि वाध्यकारी निर्णय थियो । नेपालको सिमाना जोडिएको तिब्बतमा समेत एक विरामी देखिएको थियो । त्यसपछि त केही देशले दूतावासका कर्मचारी लैजान चार्टर उडान समेत गरे । डिसेम्बर २७ मा सिफुड बजारबाट फैलिएको कोरोनालाई जनवरीको तेस्रो सातामा मात्रै विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘कोभिड १९’ नाम दिएको थियो ।”
वास्तवमा चीनकै मोडल अपनाएको भए अरु देशमा अहिलेको रुप नलिने उहाँको अनुभव छ । बाहिरका देशहरुमा असावधानी र अराकजताका कारण स्पेन, इटाली र अहिले आएर अमेरिकामा यो अवस्था आयो । डा.झालाई हामीले बीचैमा सोध्यौँ– कसरी सफल भयो चीन कोरोना माथिको विजय प्राप्त गर्न ? “मानिस मानिसबीचको सम्पर्कको कडी तोड्न चीनले गरेको प्रयास नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय थियो । लकडाउन नै त्यसको वास्तविक कारण बन्यो” डा झाले भन्नुभयो “रातारात अस्पताल बने, हजारौँ स्वास्थ्यकर्मी उहान ओरालियो । घरघरमा गएर स्वास्थ्यकर्मीले नमूना परिक्षण गर्दै अस्पताल पठाउन थाले, मानिसहरु शङ्कै नलाग्दा पनि परीक्षण गर्न आए, घरमा बस्नेहरु पनि आफै बडो अनुशासित क्वारेन्टाइनमा बसे, यस्ता धेरै कारणहरु छन् जसले चीनलाई यतिचाँडै सफल बनायो ।”
चीनको उहानमा लकडाउन गर्दा पश्चिमाहरुले मानवअधिकारको विषय उठाएको भन्दै डा.झा भन्नुहुन्छ “वास्तवमा त्यो त मानअवधिकार भन्दा पनि जनताको जीवन रक्षा गर्नका लागि लिइएको कदम थियो नि होइन ? हेर्नुहोस् हाम्रो नेपालीमा पनि बडो वैज्ञानिक र पुरानो भनाइ छ नि महामारीमा ज्यान जोगाउनु भन्ने । आखिर महिनादिन भन्दा बढी नै लकडाउन भयो त्यसैले त थोरै क्षतिमै रोगमाथि विजय नै प्राप्त भयो नि होइन ? नत्र भन्नुस त के हालत हुन्थ्यो होला आज चीनको ? अमेरिकाले पनि यही गर्नुपथ्र्याे । खुल्ला समाजको परिचायक बन्न खोजेर मात्र हुँदैन, जुन देशको पनि पहिलो काम त आफ्ना नागरिकको ज्यान बचाउने नै हो भन्छु मत ।
“हाल नेपालमा लकडाउन भन्दा प्रभावकारी उपाय अर्काे केही छैन भन्नुहुन्छ उहाँ । सरकारले भनेको मानौँ, लकडाउनका घरमै बसाँै, सामाजिक दूरी कायम गरौँ, भीडभाडबाट जोगिआँै यो भन्दा राम्रो उपाय अरु केही छैन ।” झाको सुझाव छ । कम्तीमा पनि २८ दिन लकडाउन गर्न उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । नेपालमा हालसम्म छ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ । यो ठूलो सङ्ख्या नभएपनि खतराको घण्टी बजेको अवस्था हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ । चीन वा भारतले अवलम्बन गरेको मोडललाई अवलम्बन गरेर नागरिक आफै सचेत भए आफ्नो समाज र देशलाई जोगाउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।
प्रा.डा झा सरकारले केही अस्पतालाई तत्कालै डेडिकेटेड अस्पतालका रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको बलम्बुमा रहेको अस्पतालाई डेडिकेटेड अस्पताल बनाएको छ । उहाँको सुझाव त बानेश्वरको सिभिल अस्पताललाई पनि एक डेडिकेटेड अस्पतालका रुपमा बनाउनुपर्ने भन्ने छ । भन्नुहुन्छ– यो सिभिल अस्पतालमा बढीमा १०० बेड छुट्याएर डेडिकेटेड अस्पतालका रुपमा घोषणा गरियोस् । किनभने यो सफा छ र खुल्ला ठाउँ पनि छ । यो चिनियाँको सहयोगमा बनेका अस्पताल हो र भोलि पनि सहयोग चीनबाट आउँदा यसमा आउँछ । अर्काे कुरा भोलि नेपालमा यो महामारी भित्रियो र चिनियाँ सहयोग नै चाहियो भने पनि उनीहरुले आफ्नो मापदण्डअनुसार बनाएको यस अस्पतालमा आएर उनीहरुले काम गर्नेछन्, चीनलाई सजिलो पनि हुन्छ ।
चीनमा हप्तामा एकजना परिवारका सदस्यलाई घर बाहिर जान पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । सोही कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको सामान आयातमा कुनै समस्या भएन । डा. झाको बुझाइमा “चीनमा मिडियाले पनि त्रास फैलाउनुभन्दा जनतालाई सजग गराउने समाचार नै बढी दिए । मनोवैज्ञानिक रुपमा कुनै समस्या भए के गर्ने भन्ने सूचना पनि त्यसमा उपलब्ध हुन्थ्यो । तर हाम्रोमा भने केही सञ्चारमाध्यमले त आतङ्कै फैलाएका हुन् कि भन्ने पो देख्छु मत । राष्ट्रिय विपत्तिमा पनि यस्तो हुन्छ र ?”
चीनले नेपाललाई सहयोग गर्छौं भनिरहेको प्रसङ्ग हामीले जोड्यौँ । यहाँस्थित चिनियाँ राजदूतले पनि सोही आशयको धारणा सार्वजनिक गर्दै आउनुभएको छ, हामीमा समस्या देखियो भने के साँच्चै चीनले हामीलाई सघाउँछ ?